प्याराफिन र केरोसिन स्टोभ, २०२१ मा कुन रोज्ने?
को प्याराफिन स्टोभमट्टितेल वा केरोसिन स्टोभको रूपमा पनि चिनिन्छ, धेरै देशहरूमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिँदैन, यद्यपि तिनीहरूको दक्षिण अमेरिकाका केही देशहरूमा ठूलो भूमिका रहन्छ, जहाँ प्रति बासिन्दाको आम्दानी कम छ, र कुनै एकमा पहुँच गर्न अनुमति दिँदैन। समाचार गोली स्टोभ वा को ग्यास चुल्हो. यस प्रकारको स्टोभको ठूलो फाइदा निस्सन्देह यसको मूल्य हो, जुन धेरै अन्य स्टोभहरूको तुलनामा धेरै कम छ।.
परिणाम पनि दिन्छन् यदि हामीले तिनीहरूलाई ढुवानी गर्न आवश्यक छ भने उत्तम, धेरै कोठाहरूमा तातो दिन वा यदि हामीले तिनीहरूलाई छोटो समयको लागि मात्र प्रयोग गर्छौं, तिनीहरूको सानो आकारको कारण। यसको इन्धन, प्याराफिन, कुनै पनि प्रयोगकर्ताको लागि समस्या होइन, जुन अर्को ठूलो फाइदा हो।
केरोसिन स्टोभ को तुलना
क्याम्पिङ चुलो... सुविधाहरू हेर्नुहोस् कुनै पूनरावलोकनहरू छैनन् सम्झौता हेर्नुहोस्
Iberemec PARAFINA4L... सुविधाहरू हेर्नुहोस् कुनै पूनरावलोकनहरू छैनन् सम्झौता हेर्नुहोस्
SSNG चुलो केरोसिन... सुविधाहरू हेर्नुहोस् कुनै पूनरावलोकनहरू छैनन् सम्झौता हेर्नुहोस्
टोयोटामी FR-S36A-W... सुविधाहरू हेर्नुहोस् कुनै पूनरावलोकनहरू छैनन् सम्झौता हेर्नुहोस्
Toyotomi - Light s3625ga... सुविधाहरू हेर्नुहोस् कुनै पूनरावलोकनहरू छैनन् सम्झौता हेर्नुहोस्
सबै भन्दा राम्रो	क्याम्पिङ चुलो...
मूल्य गुणस्तर	क्याम्पिङ चुलो...
हाम्रो मनपर्ने	Iberemec PARAFINA4L...
SSNG चुलो केरोसिन...
सबै भन्दा राम्रो प्याराफिन स्टोभ
यहाँ हामी तपाईंलाई देखाउँदछौं केहि उत्कृष्ट प्याराफिन स्टोभहरू तपाईले आज बजारमा किन्न सक्नुहुन्छ, र तपाईले अझ धेरै सुविधाको लागि Amazon मार्फत खरिद गर्न सक्नुहुन्छ;
Zibro LC-30 प्याराफिन ओभन
जिब्रो प्याराफिन स्टोभ अमेजनमा सबैभन्दा धेरै बेचिने मध्ये एक हो र निस्सन्देह यो यसको मूल्यको कारण हो, तर यसले हामीलाई प्रदान गर्ने विशेषताहरूको कारण हो। तिनीहरूमध्ये, निकास पाइपहरू बिना स्थापना र बिजुली कटौतीको साथ पनि यसलाई प्रयोग गर्ने सम्भावना बाहिर छ।
टोयोटोमी १ द्वारा निर्मित जिब्रो...
3KW को पावर संग 19 र 48 लिटर प्रति घण्टा सम्मको इन्धन खपत संग 0,083 र 0,313 वर्ग मिटर को कोठा तताउन पर्याप्त छ, त्यसैले यसको 5,4-लिटर ट्यांक को लागी धन्यवाद हामी एक महान स्वायत्तता प्राप्त गर्नेछौं।
यदि तपाइँ यसलाई चाहनुहुन्छ भने, यसको मूल्य लगभग 190 यूरो हो र तपाइँ यसलाई उत्तम मूल्यमा प्राप्त गर्न हाम्रो प्रस्ताव प्रयोग गरेर किन्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईं ठूलो कोठा तताउन चाहनुहुन्छ भने, हामीसँग अघिल्लो मोडेलको जेठी बहिनी छ: Zibro LC-400।
टोयोटोमीद्वारा निर्मित जिब्रो...
यसको ताप शक्ति 4KW छ, यसको ट्यांक 7,6 लिटर सम्म बढ्छ र यो 26 देखि 68 वर्ग मिटर को सतह क्षेत्र संग तताउने क्षेत्रहरु को लागी सिफारिस गरिएको छ।
यस शक्तिको साथ, तपाईंले यो प्याराफिन स्टोभलाई सनसनीपूर्ण मूल्यमा किन्न सक्नुहुन्छ यसले प्रदान गर्ने फाइदाहरूको लागि।
र यदि हाम्रो बजेट अझै कम छ भने, हामी सधैं Toyoset केरोसिन स्टोभको लागि रोज्न सक्छौं जुन हामीले 180 यूरो भन्दा बढीमा पाउन सक्छौं र हामीलाई 19 र 48 लिटर बीचको खपतको साथ 0,083 र 0,313 वर्ग मिटर बीचको कोठाहरू तताउन अनुमति दिन्छ। हामीले थर्मोस्टेटमा चयन गरेको पावर र तापक्रममा निर्भर समय।
निस्सन्देह, यो इन्धन स्टोभ साना कोठाहरू तताउन वा दोस्रो निवासमा राख्नको लागि उपयुक्त हुनेछ जहाँ हामी जाडोमा विरलै जान्छौं।
अन्तमा, हामी तपाईंलाई Zibro RS 220 तरल प्याराफिन स्टोभ देखाउन चाहन्छौं, जसको ठूलो फाइदा छ कि हामीले यसलाई सजिलै जहाँ पनि ढुवानी गर्न सक्छौं। यसको मूल्य पनि धेरै उच्च छैन यदि हामीले यसले हामीलाई प्रदान गर्ने सुविधाहरू र फाइदाहरूलाई ध्यानमा राख्छौं।
ZIBRO RS-220 - फ्राइङ प्यान ...
निस्सन्देह, ध्यान राख्नुहोस् कि यो 14 वर्ग मीटर र 32 वर्ग मीटर बीचको कोठाहरू तातो गर्न डिजाइन गरिएको हो। यो प्याराफिन स्टोभ सम्पूर्ण तुलनामा सस्तो हो तर यो पनि एक हो जसले कम से कम पावर (2,2KW) प्रदान गर्दछ।
स्टोभ लागि प्याराफिन
जस्तो कि हामीले पहिले पनि टिप्पणी गरिसकेका छौं यी चुलोमा प्रयोग हुने तरल इन्धन प्याराफिन र मट्टितेल हो। तिनीहरू बीच केही भिन्नताहरू छन् भन्ने तथ्यको बावजुद, विशेष गरी व्यापारिक स्तरमा, तिनीहरू प्रायः एउटै कुरा मानिन्छन्, जुन हामीले अबदेखि उनीहरूलाई समान ईन्धनको रूपमा प्रयोग गर्नेछौं जुन हामीले हाम्रो प्याराफिन स्टोभको लागि प्रयोग गर्नेछौं।
प्याराफिन प्राप्त गरिन्छ, धेरै विस्तारमा नजाइकन,aमार्फत तेल फिल्टर प्रक्रिया, धेरै उच्च तापमान मा आसुत। यस प्रक्रियाको साथ, एक तेल प्राप्त हुन्छ जुन त्यसपछि चिसो हुन्छ र जब यो क्रिस्टलाइज हुन्छ, यो प्याराफिन हुन्छ, निस्सन्देह, धेरै निस्पंदन प्रक्रियाहरू र एसिड र क्षारीय धुने पछि।
प्याराफिन र केरोसिन दुबै पेट्रोलियमबाट व्युत्पन्न हुन्छन्, जसले गर्दा कालो सुनको मूल्यमा निर्भर गर्दै निश्चित आवृत्तिमा तिनीहरूको मूल्य फरक हुन्छ। यो इन्धन, जुन एकातिर धेरै फाइदाजनक छ, अर्को तर्फ बेफाइदा हो किनभने यसले चुलो बत्ती बाल्दा धेरै विशेषता गन्ध छोड्छ।
प्याराफिन वा केरोसिन ठूलो संख्यामा प्रतिष्ठानहरूमा र अनलाइनबाट पनि विभिन्न भर्चुअल स्टोरहरू, जस्तै Amazon र अन्य धेरै मार्फत खरिद गर्न सकिन्छ।
प्याराफिन स्टोभका प्रकारहरू
सामान्यतया, त्यहाँ हाल दुई फरक प्रकारका प्याराफिन स्टोभहरू छन्;
विक प्याराफिन स्टोभ
यस प्रकारको स्टोभ यसको लागि बाहिर खडा छ ठूलो सरलता र सबै भन्दा माथि किनभने तिनीहरू विद्युतीय नेटवर्कमा जडान हुन आवश्यक छैन। तिनीहरूले काम गर्नको लागि तपाईंले मात्र इन्धन ट्याङ्की भर्नुपर्छ र तुरुन्तै तिनीहरूले उत्पादन गरेको ताप प्राप्त गर्न थाल्नुपर्छ।
यस प्रकारको स्टोभको एकमात्र कमजोरी हामीले तिनीहरूलाई पहिलो पटक प्रयोग गर्न चाहन्छौं र त्यो हो कि तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न सुरु गर्न हामीले यसलाई खोल्नु अघि आधा घण्टा कुर्नु पर्छ ताकि विक इन्धनमा राम्ररी भिजेको छ र काम गर्दछ। सही रूपमा।
इलेक्ट्रोनिक वा लेजर स्टोभ
विक स्टोभ, इलेक्ट्रोनिक वा लेजर स्टोभ विपरीत तिनीहरूलाई विद्युतीय प्रवाहमा प्लग गर्न आवश्यक छ किनभने तिनीहरूसँग इलेक्ट्रोनिक नियन्त्रण प्रणाली छ जसले हामीलाई ठूलो फाइदाहरू प्रदान गर्दछ। यसलाई प्रयोग गर्दा। ती मध्ये बर्नरको विद्युतीय नियन्त्रण, इन्धन बचत कार्य, बर्नरमा थर्मोस्ट्याट वा सञ्चालनको लागि दैनिक प्रोग्रामिङ हो।
प्याराफिन स्टोभले कसरी काम गर्दछ
यद्यपि त्यहाँ हाल बजारमा विभिन्न प्रकारका प्याराफिन स्टोभहरू छन्, तिनीहरूको सञ्चालन धेरै समान छ, र सरल हुनुको साथै। र यो प्याराफिनले इन्धन ट्याङ्की भर्न र सम्बन्धित बत्तीलाई उज्यालो गर्न पर्याप्त छ ताकि हाम्रो स्टोभले तातो उत्पादन गर्न थाल्छ।
यहाँ दुईवटा भिडियोहरू छन् जसले पारफिन स्टोभलाई सरल तरिकामा कसरी जलाउने भनेर देखाउँदछ जुन हामी इलेक्ट्रिक बर्नर (आधुनिक मोडेल) को साथ केरोसिन हिटरको इग्निशनमा देख्न सक्छौं:
प्याराफिन स्टोभको फाइदाहरू
तल हामी तपाईंलाई प्याराफिन स्टोभका मुख्य फाइदाहरू देखाउँछौं;
सुख्खा गर्मी। यी प्रकारका चुलोहरूले सुख्खा तातो उत्पादन गर्छन् किनभने मट्टितेलको हिटरले अन्य स्टोभको तुलनामा धेरै कम आर्द्रता निम्त्याउँछ। यसले गर्मीको अनुभूति पनि तुरुन्तै हुन्छ।
सुरक्षित इन्धन। प्याराफिन, कसैले सोच्न सक्ने विपरीत, एक सुरक्षित ईन्धन हो, जसले विस्फोटको जोखिम प्रस्तुत गर्दैन र आगोको जोखिमलाई धेरै कम स्तरमा घटाउँछ।
शून्य सुविधाहरू। अन्य प्रकारका स्टोभहरू भन्दा फरक, प्याराफिन स्टोभ प्रयोग गर्न सुरु गर्न कुनै प्रकारको स्थापना आवश्यक पर्दैन।
गर्मी धेरै छिटो फैलिन्छ कोठा भर जहाँ स्टोभ स्थित छ
तिनीहरूले ठूला ठाउँहरू तताउन सेवा गर्छन्। सबैभन्दा सानो प्याराफिन स्टोभहरू 20 वर्ग मिटरसम्मको ठाउँहरू तातो गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर ठूला मोडेलहरूले कोठाहरू तीन गुणा ठूला तताउन सक्छन्।
उत्कृष्ट प्रदर्शन। यी स्टोभहरूको ऊर्जा दक्षता १००% नजिक छ, जसले हामीलाई उत्कृष्ट प्रदर्शन प्रदान गर्दछ
मूल्य। हाल प्याराफिन स्टोभको मूल्य, विशेष गरी यदि हामी यसलाई अन्य प्रकारका स्टोभहरूसँग तुलना गर्छौं भने, वास्तवमै धेरै कम छ।
ठूलो बचत। प्याराफिन स्टोभहरू बेच्ने राम्रो मूल्यको अतिरिक्त, तिनीहरूको सञ्चालन धेरै किफायती छ किनभने केवल 20 लिटर प्याराफिनको साथ हामी स्टोभ लगभग 100 घण्टासम्म चलाउन सक्छौं।
प्याराफिन स्टोभ को बेफाइदा
हावायुक्त ठाउँहरू। तिनीहरू हावायुक्त ठाउँहरूमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ
कार्बन डाइअक्साइडबाट सावधान रहनुहोस्। यस प्रकारको स्टोभको मुख्य बेफाइदाहरू मध्ये एक कार्बन मोनोअक्साइड तिनीहरूले उत्पादन गर्दछ, जुन मानिसको लागि घातक हुन सक्छ। तिनीहरूसँग सुरक्षा प्रणालीहरू छन् जसले घटनाको खतराहरूलाई रोक्नुपर्दछ, तर यो रातमा प्रयोग नगर्नु र हामीले पहिले नै राम्रो हावायुक्त ठाउँहरूमा भनेझैं यो गर्न चाखलाग्दो छ।
गन्ध छोड्नुहोस्। प्याराफिन र केरोसिनले गन्ध छोड्छ, विशेष गरी इग्निशन चरणमा, जुन केहि व्यक्तिहरूको लागि धेरै अप्रिय हुन सक्छ।
प्याराफिन स्टोभको खपत
हामीले पहिले नै टिप्पणी गरिसकेका छौं कि प्याराफिन स्टोभको खरिद हाम्रो लागि साँच्चै किफायती हुन सक्छ, तर हामीलाई यसको लागि आवश्यक इन्धन पनि सम्भव छ कि यो धेरै किफायती छ। र यो स्टोभ को लागी प्याराफिन एक साँच्चै कम मूल्य को लागी पाउन सकिन्छ कि छ। उदाहरण को लागी, एक अनलाइन खोजी पछि, हामी प्राप्त गर्न सक्षम भएका छौं 20 लिटरको इन्धन मात्र 40 यूरोको लागि, त्यसैले यो अनुमान गर्न सजिलो छ कि एक लिटर प्याराफिनको मूल्य2यूरो छ।.
प्याराफिन स्टोभको खपत यसको शक्तिमा निर्भर गर्दछ, तर साधारण स्टोभले 40 वर्ग मिटरको कोठा तताउन सक्षम छ। खपत जुन 0,10 र 0,30 लिटर / घण्टाको बीचमा हुनेछ। यो पक्कै पनि हामी कोठामा पुग्न चाहने तापक्रम, इन्सुलेशनको गुणस्तर र अन्य पक्षहरूमा निर्भर गर्दछ।
यी डाटाबाट हामी निम्न दायरा प्राप्त गर्न सक्छौं:
0,10 लिटर / घण्टा x €2/ लिटर = € 0,20 / घण्टा
0,30 लिटर / घण्टा x €2/ लिटर = € 0,60 / घण्टा
र यी निष्कर्ष निकाल्नुहोस्;
उत्तम केस: € 0,20 / h / 40 वर्ग मीटर = € 0,005 / घन्टा
सबैभन्दा खराब अवस्था: € 0,60 / h / 40 वर्ग मीटर = € 0,015 / घन्टा
प्याराफिन स्टोभ सुरक्षित छन्?
धेरै मानिसहरू विश्वास के विपरीत प्याराफिन स्टोभहरू एकदम सुरक्षित छन्, न्यूनतम हेरचाहको साथ र तिनीहरूलाई प्रयोग गर्दा ध्यान। निस्सन्देह, यो बेवास्ता गर्न सकिँदैन कि तिनीहरू सबैभन्दा सुरक्षित स्टोभ होइनन् जुन हामीले आज बजारमा पाउन सक्छौं।
सबै भन्दा पहिले तिनीहरूले दिने गन्ध संग सावधान रहनु धेरै महत्त्वपूर्ण छ यी स्टोभहरू जब हामी तिनीहरूलाई खोल्छौं र यसले हामीलाई केही अन्य समस्या निम्त्याउन सक्छ। साथै, यदि हामीले तिनीहरूलाई हावायुक्त ठाउँहरूमा प्रयोग गर्छौं र तिनीहरूले छोड्ने कार्बन मोनोअक्साइडसँग सम्भावित समस्याहरू रोक्नको लागि हामीले तिनीहरूलाई रातमा प्रयोग गर्नबाट जोगिने हो भने, तिनीहरूले हामीलाई धेरै समस्याहरू दिनु हुँदैन।
प्याराफिन स्टोभहरू दैनिक प्रयोगको लागि निश्चित रूपमा सुरक्षित छन्, जबसम्म, र लगभग सबै स्टोभहरू जस्तै, हामी तिनीहरूलाई प्रयोग गर्दा न्यूनतम हेरचाह गर्छौं।
मट्टितेलको चुलो कहाँ राख्ने
यद्यपि केरोसिन वा प्याराफिन स्टोभहरू धेरै कुशल छन् जब यो राम्रो भेन्टिलेसन भएको कोठामा आउँछ, यसलाई यसको कार्यसम्पादन अनुकूलन गर्न उपयुक्त ठाउँमा राख्नुपर्छ।
तिनीहरूको खाली ठाउँहरूको लागि सिफारिस गरिन्छ १०० वर्ग मिटरसम्म, यद्यपि यो पनि शक्ति मा निर्भर गर्दछ। तपाईंसँग जति धेरै शक्ति छ, उति धेरै ठाउँ तपाईं ताप्न सक्नुहुन्छ। यसलाई सुत्ने कोठामा वा घरको कम हावा चल्ने ठाउँमा राख्नु उचित हुँदैन, किनकि यसले दुर्गन्धसहित ग्यासहरू उत्सर्जन गर्छ र त्यो अत्यधिक मात्रामा विषाक्त हुन्छ।
धेरैजसो मट्टितेल चुलोमा छन् विरोधी टिप प्रणाली र सेन्सर तिनीहरूले ग्यास रोक्न वातावरणमा CO2 को मात्रा पत्ता लगाउँछन्। यदि तपाईंसँग स्टोभ राख्ने योजना भएको ठाउँमा विद्युतीय जडान छैन भने, तपाईंले विक प्याराफिन स्टोभ छनौट गर्नुपर्नेछ।
प्याराफिन स्टोभ कसरी जलाउने
यदि तपाईंले प्याराफिन स्टोभ किन्नु भएको छ भने, यो सामान्य छ कि तपाइँ यसलाई कसरी सुरु गर्ने बारे पहिलो शङ्का गर्नुहुन्छ। यहाँ हामी तपाईंलाई यो जान्न मद्दत गर्छौं। यो तपाईले सोच्नु भन्दा सजिलो छ, तपाईले केवल निम्न गर्नु पर्छ:
केरोसिन इन्धन ट्याङ्की भर्नुहोस्। प्राकृतिक पम्प प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो गर्नको लागि, हामी केहि ट्यूबहरू प्रयोग गर्छौं र तिनीहरूलाई ड्रममा परिचय गराउँछौं। अर्को हामी म्यानुअल पम्प।
पछि ट्याङ्की चुलोमा जडान गरिएको छ र यो ठीकसँग राखिएको छ भनी सुनिश्चित गर्दछ।
अन्ततः, क्र्याङ्क घुमाइएको छ स्टोभ चलाउन र यो काम गर्न सुरु हुनेछ।
प्याराफिन स्टोभ कसरी सफा गर्ने
यद्यपि प्याराफिन स्टोभहरू धेरै व्यावहारिक र कुशल छन्, तिनीहरू पनि बिगार्छन् र फोहोर हुन्छन्। उपभोग समस्याहरू वा कुनै खतराबाट बच्नको लागि, तिनीहरूलाई सधैं राम्रोसँग हेरचाह र सफा राख्नु राम्रो हो।
यसको मर्मतसम्भार धेरै जटिल छैन, तर यसलाई सधैं राम्रो अवस्थामा राखिनुपर्छ ताकि यो सकेसम्म लामो समयसम्म काम गर्दछ। यसलाई कायम राख्न, तपाईंले केवल निम्न कार्यहरू गर्नुपर्छ:
जब हामी स्टोभ खोल्छौं, हामीले दिमागमा राख्नु पर्छ कि बटन4सेकेन्ड भन्दा बढीको लागि थिच्नु हुँदैननत्र हामी बिस्तारै बिस्तारै प्रतिरोधलाई जलाउँदै जानेछौं। हुनसक्छ अर्को पटक हामी स्टोभ खोल्न चाहन्छौं हामीसँग त्यसो गर्न प्रतिरोध हुनेछैन।
बत्तीलाई पनि थोरै हेरचाह चाहिन्छ। जब चिसो मौसम समाप्त हुन्छ र हामी स्टोभ प्रयोग गर्न बन्द गर्न जाँदैछौं, हामीले ट्याङ्कीमा सबै प्याराफिन जलाउनु पर्छ। स्टोभ आफैले काम गर्न बन्द गर्न को लागी पर्खनु पर्छ। जब यो हुन्छ, विक सुक्छ र हामी यसलाई कडा हुनबाट रोक्छौं।
जब तपाइँ विक वा प्रतिरोध परिवर्तन गर्न आवश्यक छ, तपाइँ आफैले गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले तिनीहरूलाई छुट्टै किन्नुहोस् र केसलाई अलग गर्नुहोस्। त्यहाँ पुगेपछि तपाईंले भागहरू मात्र प्रतिस्थापन गर्नुपर्नेछ।
तपाईले देख्न सक्नुहुने रूपमा, सामान्य मा मर्मत एकदम सरल छ।
के तिनीहरू प्रभावकारी छन्?
त्यहाँ धेरै प्रकारका प्याराफिन स्टोभहरू छन् र तिनीहरूमध्ये प्रत्येकको शक्तिको आधारमा दक्षता छ। यस प्रकारको स्टोभले छोटो समयमा कोठाको तापक्रम बढाउन सक्छ। यो क्षमताले यसको खपत अलि बढी बनाउँछ।
प्याराफिन बेचिन्छ 20 लिटर ड्रममा सामान्यतया, 40 र 50 यूरो बीचको मूल्यहरु संग। एकचोटि तपाईंले स्टोभ खोल्नुभएपछि, यसको शक्ति र तपाईंले यसलाई खोल्ने तीव्रतामा निर्भर गर्दछ, यसले खपत गर्दछ। प्रत्येक घण्टा 0,13 र 0,30 लिटर बीच।
तिनीहरू ठाउँहरूको लागि उपयुक्त छन् जहाँ ड्राफ्टहरू छन्। उदाहरण को लागी, सार्वजनिक स्थानहरु लाई तातो गर्न को लागी जहाँ ढोकाहरु लगातार खोलिएको र बन्द वा झ्यालहरु खोलिएको छ। थप रूपमा, तिनीहरूको क्षमता कहीं पनि र स्थापनाको आवश्यकता बिना ढुवानी गर्न, तिनीहरूलाई थप कुशल बनाउँछ।
प्याराफिन वा ग्यास चुलो
स्टोभका प्रयोगकर्ताहरू बीचको निरन्तर विवाद प्याराफिन र ग्यास चुल्होहरू बीचको तुलना हो। प्रत्येक प्रकारको स्टोभको यसको फाइदा र बेफाइदाहरू छन्, प्रयोगमा निर्भर गर्दछ जुन दिइनेछ।
हामी प्रत्येक प्रकार को लाभ र विपक्ष स्पष्ट गर्न एक तुलना प्रस्तुत गर्न प्रयास गर्न जाँदैछौं।
प्याराफिन स्टोभ प्रदान गर्दछ एक सुख्खा गर्मी र गर्मीको द्रुत अनुभूतिलाई समर्थन गर्दछ। इन्धन सुरक्षित छ र कुनै सुविधा आवश्यक छैन। यो 100% को नजिक एक उपज छ र एक ठूलो बचत प्रतिनिधित्व गर्दछ। यद्यपि, यो हावा आवतजावत गर्ने ठाउँहरूको लागि मात्र सिफारिस गरिन्छ र यसलाई रातमा तपाईंको कोठा तताउन प्रयोग गरिँदैन, किनकि यसले बन्द गर्छ। कार्बन मोनोअक्साइड। इन्धनले अप्रिय गन्ध दिन्छ, विशेष गरी यसलाई खोल्दा र बन्द गर्दा।
अर्कोतर्फ, ग्यास चुल्होहरू सार्न सजिलो छ, किनकि तिनीहरूमा निर्मित पाङ्ग्राहरू छन्। तिनीहरू खोज्न सजिलो र किन्न सस्तो छन्। तिनीहरूसँग राम्रो सुरक्षा उपायहरू छन् र इन्धन पनि सस्तो छ। तिनीहरूलाई धेरै मर्मतसम्भारको आवश्यकता पर्दैन। यद्यपि, तिनीहरू खराब हावायुक्त ठाउँहरूमा प्रयोग गर्न सकिँदैन र वातावरणमा धेरै आर्द्रता उत्पन्न गर्दछ।
देख्न सकिन्छ, दुवै को फाइदा र बेफाइदा धेरै समान छन्। तसर्थ, तपाईलाई चाहिने प्रकारको आधारमा एउटा वा अर्को किन्न सल्लाह दिइन्छ। आवश्यक पर्ने ठाउँहरूको लागि द्रुत तताउने र ड्राफ्टहरू, प्याराफिन स्टोभ राम्रो छ। यदि, अर्कोतर्फ, हामीलाई समयको साथमा अझ स्थिर हुने चुलो चाहिन्छ र यसले ठूला ठाउँहरूमा गन्ध छोड्दैन भने, हामी ग्यास चुलो प्रयोग गर्नेछौं।
के एक प्याराफिन स्टोभ एक केरोसिन स्टोभ जस्तै हो?
यो एक प्रश्न हो जुन धेरै मानिसहरू आफैलाई सोध्छन्। प्याराफिन वा केरोसिन? तर, शंका गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन, तिनीहरू उस्तै छन्। प्याराफिन वा केरोसिन एक प्रकारको पारदर्शी र ज्वलनशील इन्धन हो जुन पेट्रोलियमको आसवन मार्फत प्राप्त गरिन्छ। यो कीटनाशकको ​​निर्माणमा र विलायकको रूपमा पनि प्रयोग गरिन्छ।
चुलोको क्षेत्रमा प्रयोग गर्दा, केरोसिन भन्दा प्याराफिन शब्द प्रयोग गरिन्छ। यद्यपि, दुई सर्तहरूले एउटै प्रकारको इन्धनलाई जनाउँछ। ज्वलनशील हुनाले प्रयोग र ढुवानी गर्दा सावधानी अपनाउनुपर्छ।
यस जानकारीको साथ, यो पक्का छ कि प्याराफिन स्टोभ सम्बन्धित सबै पक्षहरू स्पष्ट गरिएको छ। अब तपाईले आफ्नो आवश्यकता अनुसार तपाईलाई उपयुक्त हुने स्टोभको प्रकार रोज्नुपर्छ।
1 केरोसिन स्टोभ को तुलना
2 सबै भन्दा राम्रो प्याराफिन स्टोभ
2.1 Zibro LC-30 प्याराफिन ओभन
2.3 टोयोसेट LC-3010
3 स्टोभ लागि प्याराफिन
4 प्याराफिन स्टोभका प्रकारहरू
4.1 विक प्याराफिन स्टोभ
4.2 इलेक्ट्रोनिक वा लेजर स्टोभ
5 प्याराफिन स्टोभले कसरी काम गर्दछ
6 प्याराफिन स्टोभको फाइदाहरू
7 प्याराफिन स्टोभ को बेफाइदा
8 प्याराफिन स्टोभको खपत
9 प्याराफिन स्टोभ सुरक्षित छन्?
10 मट्टितेलको चुलो कहाँ राख्ने
11 प्याराफिन स्टोभ कसरी जलाउने
12 प्याराफिन स्टोभ कसरी सफा गर्ने
13 के तिनीहरू प्रभावकारी छन्?
14 प्याराफिन वा ग्यास चुलो
15 के एक प्याराफिन स्टोभ एक केरोसिन स्टोभ जस्तै हो?
स्टोभ » प्याराफिन र केरोसिन स्टोभ
"प्याराफिन र केरोसिन चुलो" मा 1 टिप्पणी
साल्भाडोर प्याराडिस प्राट्स ६६७९५५५५७
अप्रिल २०, २०२० 11::2019 अपराह्न
सबै विक्स उस्तै छन् वा स्टोभ माइन Kero 260 A अनुसार धेरै उपायहरू छन् म जान्न चाहन्छु कि मलाई कुन विक्स चाहिन्छ र तिनीहरूको मूल्य छ भने